प्रोफेसर कविता लामाकृत ‘बबी जामा’ अनि डा दिपेन तामाङको ‘बालसाहित्यको सैद्धान्तिक पक्ष’ लोकार्पित – Sikkim Journal
गान्तोक, 22 नोभेम्बर। सिक्किम विश्वविद्यालयको नेपाली विभागका प्राध्यापक कविता लामाकृत बाल संस्मरण ‘बबी जामा’ अनि डा. दिपेन तामाङद्वारा लिखित ‘बालसाहित्यको सैद्धान्तिक पक्ष’ पुस्तकको लोकार्पण सिक्किम विश्वविद्यालय नेपाली विभागमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाली विभागकी प्रध्यापक पुष्प शर्माले गरेकी थिइन्।
कवि समालोचक प्रवीण राई जुमेली यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि थिए। कार्यक्रममा सिक्किमका साहित्यकार उषा शर्मा, रत्न लक्सम सुब्बा, प्रवीण खालिङ आदि विशेष उपस्थित रहेका थिए भने सिक्किम विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागका प्राध्यापकगण पनि उपस्थित थिए।
कार्यक्रममा डा. दिपेन तामाङद्वारा लिखित पुस्तकबारे डा. देवचन्द्र सुब्बाले पाठकीय टिप्पणी राखे। यसरी नै डा. लामाकृत संस्मरण सङ्ग्रहबारे समालोचक प्रवीण राई जुमेलीले आफ्ना विचार राखेका थिए। भारतीय नेपाल साहित्यमा सैद्धान्तिक पुस्तकहरूको खाँचो रहेकाले यस्ता पुस्तकहरूको आवश्यकता रहेको अनि यी विषयहरूलाई अझ गम्भीर प्रकारले अध्ययन गर्दै, लेख्दै जानु पर्ने कुरा डा सुब्बाले राखे।
बबी जामाबारे बोल्दै प्रवीण राई जुमेलीले कविता लामाको मूल परिचय ‘आप्पाकी छोरी’ भित्र देखिन्छ र यस्ता पुस्तकले सैद्धान्तिक पुस्तकहरूले थकाएको मस्तिष्कलाई आराम दिने काम गर्छ भन्ने कुरा राखे। कार्यक्रममा उप प्रा. बलराम पाण्डे, प्रवीण खालिङ, रत्न लक्सम सुब्बा अनि उषा शर्माले आ-आफ्ना कविता सुनाए।
डा. कविता लामाले आफ्नो जन्म दिनमा यो कृति आमाका लागि उपहार हो भन्ने मन्तव्य राखिन्। प्राध्यापक पुष्प शर्माले कार्यक्रमको साङ्गोपाङ्गो विवरण दिएकी थिइन्। शोधार्थी रत्न रसाइलीको स्वागत् भाषणबाट शुरु भएको कार्यक्रम डा. सुमन बान्तवाको धन्यवाद ज्ञापनबाट टुङ्गियो। कार्यक्रममा शोधार्थी योगेश लिम्बूलाई पुस्तक प्रकाशनमा सहयोगको निम्ति कृतिकारद्वारा सम्मान जनाइयो। कार्यक्रमको सञ्चालन शोधार्थी कृष्णकुमार सापकोटाले गरेका थिए।